Nandray An-tanana Ny Olan’ny Governemanta Ao An-toerana Momba Ny Fisotroan-dronono Ny Mpanao Gazety Olom-pirenena Iray ao India Ka Nandresy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2016 16:38 GMT
Vakio amin'ny teny srpski, русский, Ελληνικά, Español, English
Niseho voalohany tao amin'ny VideoVolunteers, fikambanana iraisam-pirenena iray nahazo loka tamin'ny fampahalalam-baovaom-piarahamonina tao India ity lahatsoratra ity. Navoaka ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny tatitra naverina eto ambany.
Nitondra fiovana ho an'ny olona efa ho 3.000 tao amin'ny fanjakana Indiana ao Bihar ny fisisihan'ny vehivavy iray hahazo ny rariny. Nahazo ny trosa ambin'ireo fisotroan-dronono avy amin'ny manam-pahefana izy ireo rehefa nanao tatitra momba ny fitarainan'ireo niharam-boina ny iraky ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers , ary nampiseho izany tamin'ireo manam-pahefana ka nanaraka ny raharaha nandritra ny volana maro.
Manana tetikasa fanampiana sy fanohanana ara-tsosialy nasionaly maro i India, izay manome fanampiana ara-bola amin'ny alàlan'ny fanomezana fisotroan-dronono ho an'ireo beantitra, mpitondratena sy ny olona manana fahasembanana. Tsy izy mihitsy ny rafitra fiarovana ara-tsosialy ao India raha oharina amin'ny firenena hafa. Ohatra,mahazo ny fisotroan-dronono tena faran'izay kely toy ny 400 ropia (6 $ Amerikana fotsiny) isan'olona isam-bolana ireo zokiolona 16,5 tapitrisa (65 taona mihoatra) anatin'ny tokonam-baravaran'ny fahantrana. Kely ny tombony azo, ary manakana ny maro tsy handray izany ara-potoana ny kolikoly sy ny tandrevaka.
Herintaona lasa izay, naka lahatsary ny iraky ny vondrom-piarahamonina Tanju Devi tamin'ny ambin-trosan'ny fisotroan-dronono tsy azo nandritra ny herintaona ho an'ireo olom-pirenena kilemaina, ireo mpitondratena sy ny beantitra ao Gaunaha, distrika Andrefan'i Champaram ao amin'ny fanjakan'i Bihar any amin'ny faritra atsinanan'i India.
Tamin'ny fanapahan-kevitra mba hitondra ny rariny ho an'ny rehetra, dia niainga i Tanju mba hampiseho ny vondrom-piarahamoniny ny fomba hanehoany fikirizana sy firindrana mba ahatonga fandraisana andraikitra sy fanovana avy amin'ireo manampahefana. Nandrakitra lahatsary tamin'ny fijoroana vavolombelon'ny mponina voakasika maro izy, ary nihaona tamin'ny Block Development Officer (BDO) ao Gaunaha , ary nitondra ny lahatsary niaraka taminy sy ny taratasy fangatahana fisotroan-dronono;
Ohatra, naseho tamin'ny alalan'ny rafitra fisotroan-drononon'ny zokiolona ‘nahitsy’ ny tsy fahombiazan'ny rafitra fisotroan-dronono hanohanana ny fiveloman'ireo tena [noana sy tsy manankohanina]. Tamin'ny 2008, nanondrotra ny fisotroan-drononon'ny beantitra avy amin'ny 300 mankany amin'ny 400 ropia ny governemantan'i India. Na izany aza, miharihary ny tsy fahavitan'ny mividy ny filàna fototra araka ny lahatahirin'ny fanisam-bahoaka tamin'ny 2011. Araka ny lahatahiry, maherin'ny 11,7 tapitrisa ny olona mihoatra ny 70 taona no mbola miasa ao India, ny ankamaroan'izy ireo miasa tontolo andro. 2,5 tapitrisa amin'izy ireo no mihoatra ny taona 80, hoy ny tatitra nanampy.